दामोदर पुडासैनीको पहाड र प्रेमभित्रका उज्याला किरणहरु - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’ साहित्य प्रेमीहरुका लागी नौलो नाम होइन । आफन्तका अनुहारहरु, आँखाको खोजीमा, आलोकित आयाम, आकारको खोजीमा, समयको सहीछाप, पहाड र प्रेम जस्ता कविता सङ्ग्रहरु र यात्राका प्रेमिल तरङ्गहरु, नमेटिएका चित्रहरु र माया लु हुम्ला जस्ता नियात्रा कृतिहरु रचेर उनले नेपाली साहित्यलाई ठूलो गुण लगाएका छन् । साहित्यको विकासमा दह्रिलो ईट्टा थप्न लालायित किशोरको नयाँ कृति ‘पहाड र प्रेम’ फरक स्वादका साथ भर्खरै प्रकाशित भएको छ ।
‘पहाड र प्रेम’ गद्य शैलीमा रचिएको शृङ्खलावद्ध कृति हो । कुल ८१ शृङ्खलामा विभाजित यो कविता सङ्ग्रह पहाड र प्रेमको केन्द्रियतामा भिन्न नौला बिम्बहरु मार्फत नवीन जीवन उद्घाटन गर्न खोजिएको छ । शरिरलाई पहाड र मनलाई प्रेमको संज्ञा दिएर यो कृति रचिएको छ । प्रेमलाई अटल र अजम्बरी बनाउन शरिर र मनको तादाम्यता मिल्नै पर्छ भन्ने कुरा यसको मूख्य सार हो ।
साहित्य कल्पना मात्र हो भन्नेहरुको ठूलो जमात छ । ‘पहाड र प्रेम’ त्यो विचारलाई सहजै चिर्न सफल देखिन्छ । प्रेम अटल हुनुपर्छ । निश्वार्थ हुनुपर्छ । एक अर्काप्रति समर्पित हुनुपर्छ । वासनामात्रले भरिएको प्रेम प्रेम नै होइन । यीनै कुरालाई ‘पहाड र प्रेम’ मा जोड दिईएको छ । प्रकृतिलाई मानविकीकरण गरेर बेग्लै सौन्दर्य सिर्जना गर्ने काम पनि पहाड र प्रेममा भएको छ ।
प्रेम र जीवनलाई सुक्ष्म ढंगले केलाउन खप्पिस किशोर ‘पहाड र प्रेम’ मा पनि यस्तै सक्षमता देखाउन सक्षम देखिन्छन् । जीवनलाई सम्भावनाहरुको पहाड ठान्ने उनका रचनाहरु सुख र दुख, हाँसो र आँसुका बिचपनि पाठकको मन जित्न सफल छन् । सभ्य र सरल शैलीमा रचिएको यो कृति श्रृंगार रसको बहानामा अश्लिल शब्दहरुलाई मलजल गर्न रुचाउने साहित्यकाहरुका लागी पथप्रदर्शक छ । मूख्य विषयलाई दिग्भ्रमित हुन नदिनु कविको अर्को सबल पक्ष हो । कविताको भाव पढ्ने र सुन्नेले मनन् गर्न सक्ने खालको हुनै पर्दछ । कविता लेखनका निश्चित सीमा छन् । ती सीमाहरुलाई परिस्कार गर्दै नवीन सीमा र क्षितिज बनाउँन पनि यो कृति अत्यन्त सफल छ । कविता पढेपछि अनुभूती गर्न सक्ने खालको भएन भने कवि सफल भएको मानिदैन । कवि पुडासैनी आफुले उठाएको विषयप्रति प्रष्ट छन् । त्यसैले ‘पहाड र प्रेम’ पढ्नेहरुले कतै कुनै हरफहरु भाव नबुझ्दा दोहो¥याएर पढ्ने अवस्था सृजना हुँदैन । बरु प्रेमका लागी प्रेम गर्नेहरु कविताका प्रत्येक शब्द, हरफ र अनुच्छेदमा सललल बग्न सक्छन् । प्रेमको सागरमा तैरिएको अनुभूती गर्न सक्छन् । आँखा खोलेर कविता पढिरहँदा पनि अन्तरमनमा बलिरहेको प्रेमको दियोमा तेल थपिरहन उद्दत हुन्छन् । जुन कुरा एउटा कुशल रचनाकारका लागी प्रशंसनीय विषय हो ।
खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपोचार, बाटोघाटो यी सबै कुरा मान्छेका सहज जीवनका अनिवार्य पाटाहरु हुन् । भौतिक विकासको दृष्टिमा धेरै टाढा कर्णाली अञ्चलको हुम्ला जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्यले जति भरिपूर्ण छ । यी चिजहरुको अभावले त्यहाँको जीवनलाई त्यति नै कष्टकर बनाएको छ । जुन कुरा ‘पहाड र प्रेम’ २४ औं भागसम्म निकै सरल ढंगले समावेश छ । तर भौतिक सुख सुविधाको खानीबाट प्रकृतिसँग रमाउन हुम्ला पुगेको युवकलाई शहरको राजधानी छोड्नु पर्दा कुनै पिडा हुँदैन । बरु स्वार्थका लागी प्रेमको नाटक गर्नेहरुका बिच हुम्लाको चोखो प्रेमीबाट टाढा हुनुपर्दा छट्पटाउँछ । बलिद्र धारा आँसु झार्छ । तर के गर्नु र ! समय सधै कहाँ आफ्नो पक्षमा भईरहन्छ । उ विवश भएर त्यो ठाउँ छोड्न बाध्य हुन्छ । जुन कुरालाई कविले निकै मिठास शब्दहरुमा उल्लेख गरेका छन् ।
कृतिका प्रत्येका पानाहरु पल्टाउँदै जाँदा पाठकको मनमा उत्सुक्ताको बाँध फुट्न थाल्छ । यसपछि के होला ? त्यसपछि के होला ? नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँहरुमा पुगेका बेला रचिएका ८१ मार्मिक कविताहरु छन् ‘पहाड र प्रेम’ मा । कविताको रसमा डुब्न चाहने र कविता लेख्न सिक्न चाहने सबैका लागी यो कृति अनुसरणीय छ । ज–जसको हातमा यो कृति पर्छ, दुई चार पाना पल्टाएर त्यसै थन्काउने आँट कसैले गर्ने छैनन् ।
साहित्यकार दामोदर पुडासैनीले स्वदेश तथा विदेशका धेरै ठाउँहरुको भ्रमण गरेर विविध अनुभव समेटेका छन् । उनले आफ्ना अनुभवहरु र अनुभूतिहरुलाई देशका विभिन्न हिमाल, पहाड र बन बुट्यानको सामिप्यतामा बेग्लै सिर्जना गर्न भ्याएका छन्, ‘पहाड र प्रेम’ का शृङ्खलाहरुमा । प्रकृतिलाई पहाडको रुपमा अँगालेर प्रेमको रङ्गले नवीन आविश्यकार गर्नु पनि यस कृतिको विशेषता भएको छ । प्रकृतिसँगको प्रेम र त्यसबाट उठेका सँस्कृति, समाज, धर्म राजनीतिका अनेकौं रङ्गचित्रहरुलाई कविताहरुले कोट्याएका छन् ।
कवि स्वभावैले बन्धनरहित बन्न चाहन्छ । उ अरुका अनावश्यक उल्झन र लोलोपोतो चाहदैन । साहित्यकार दामोदर पुडासैनी पुडासैनी एक निष्ठावान, सत्यवादी र उज्यालोको लागी जस्तोसुकै आहुति दिन पनि पछि नपर्ने स्रष्टा हुन् । उनका यस संङ्ग्रह भित्रका कविताहरुले यही कुराको पुष्टी गर्दछन् । उनका यी कविताहरु रोचक, भावपूर्ण, कल्पनाले भरिपूर्ण, प्रेम, साहस, भावुकता, संवेदना आदिलाई आत्मसात गरेर स्वच्छन्दतावादबाट अघि बढेका छन् । कवितामा यथार्थवादीताको प्रसस्त छनक छन् । समय र जीवनलाई बेग्लै र अर्थपूर्ण ढङ्गले अघि बढाउँन खोजिएको पाईन्छ ।
‘पहाड र प्रेम’ एकल विषयको ८१ वटा कविताको एउटै पुष्पहार हो । एकै जीवन र जगतलाई फरक समय र फरक कोणबाट नियाल्ने र ब्रहमाण्डका रहस्यहरुलाई उजागर गर्दै अग्रगतिमा डो¥याउँने विशेष क्षमता पनि पहाड र प्रेमका कविताहरुले प्रस्तुत गरेका छन् ।
पहाड र प्रेममा दामोदर पुडासैनीको लेखन चमत्कार देख्न सकिन्छ । यो शृङ्खलावद्ध भएर पनि फुटकर कविताको उत्तम नमूना पनि हो । यो कृति काव्य परम्पराको नौलो आयाम पनि हो । एउटै केन्द्रीय काव्यका वरिपरि सबै कविताहरु परिक्रमा गराउँन सक्नुमा कविको शैलीगत चमत्कार प्रकट हुन्छ ।
बिम्बको उचित प्रयोगले कविता सुन्दर र अर्थपूर्ण बन्दछ । दामोदर पुडासैनी उपयुक्त र नवीन बिम्बहरुको माध्यमबाट कवितालाई जादुगरी रुपमा उभ्याउँन खप्पिस देखिन्छन् । उनका कविताहरुमा हिमाली र पहाडी जीवन शैलीका बिम्बहरु प्रबल बनेर उभिन्छन् । सौन्दर्य उपासनाका बिम्बहरु प्रेमको सघनता र गहिराईका बिम्बहरु, पहाडी र हिमाली सँस्कृतिका बिम्बहरु, अग्रगामी र गतिशिलताका बिम्बहरु, समय सचेतताका बिम्बहरु, विषम परिस्थितिजन्य बिम्बहरु, सकारात्मक सोचका बिम्बहरु र यौनजन्य बिम्बहरुको सटिक प्रयोगले पहाड र प्रेम पठनीय कृति बनेको छ ।
‘पहाड र प्रेम’ भित्रका कविताहरु सरल छन् तर बहुअर्थी र बहुफल दिन समर्थ छन् । शब्द सौन्दर्यले पाठकहरु मुग्ध हुने मात्र होइन कविताहरुले प्रत्येक पाठकलाई शक्तिको सञ्चार गराउँदछन् । समकालिन कविता लेखनमा शिथिलता आईरहेको छ भन्नेहरुका लागी गतिलो जवाफ पनि हो दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’ को पहाड र प्रेम ।
विविधता र अनिश्चयमा रमाईरहेछ जिन्दगी । मान्छेको उपस्थितिले रमणीय बनेको छ संसार । संसारको वैचित्र्यताले सधै उमङ्गित बन्दैछ मान्छे । दुख, पीडा, सुख, आनन्द, सबैकुराका पहाडहरु नाघिरहनु पर्छ मान्छेले । प्रेमको रङ्गले कुतुहलकारी र प्रतिफलमुखी बनेको छ जगत । दामोदर पुडासैनीले पहाड र प्रेम कविता सङ्ग्रहमा यही अभिव्यक्ति दिएका छन् । जीवन सार्थक बनाउँन बेग्लै ओज, मार्ग र समाधानहरु पनि प्रशस्त भेटिन्छन् यो कृतिमा ।
पहाड र प्रेम नेपाली प्रयोगात्मक कविता लेखनको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण, पठनीयर सार्थक कृतिको रुपमा पाठक समक्ष आएको छ । यो कृतिले नेपाली कविता लेखन परम्पराका सीमाहरुलाई फरक बनाउँदै नवज्योती फैलाउँन सक्षम बनेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुने छैन ।